manual ပွင့်လင်းရော်ဘာဟော့စာနယ်ဇင်းစက် - တရုတ် Qingdao ပုံမှစက်
FOB စျေး: အမေရိကန် $ 6000 - 100000 / Piece
Min.Order အရေအတွက်: တစ်ခုမှာသတ်မှတ်မည်
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: တစ်လလျှင် 50 သတ်မှတ်မည်
ရော်ဘာ Vulcanizer စက်ရာဘာထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးတို့ကို vulcanizing များအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဖိနပ်ကိုနင်းနဲ့တူကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့လျှောက်လွှာမှာတော့ကျနော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်ဒါပေါ်လက်စွပ်, ရော်ဘာရေနံတံဆိပျမြားနှငျ့ပိုး, သေးငယ်တဲ့တာယာရော်ဘာနှင့်ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်များအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ရန်မှို add နှင့်လည်းပေါ်ကိုခါးပတ်များကဲ့သို့အချို့သော Non-မှိုထုတ်ကုန်။ဖွဲ့စည်းပုံ:The rubber vulcanizer machine is mainly consists of oil hydraulic control system, piston, hot plate and electric relay or PLC control system.Features:1. The rubber vulcanizer machine adopts electrical heating, steam heating or heat conducting oil heating according to customer requirements.2. Heating Plate Material: used good quality steel-Q235-A.3. The manual open rubber hot press machine adopts electric relay manual control system, when get to the pre-set vulcanizing(curing) time, the machine will alarm, then worker go to manually open the machine by operate the handle.Option: PLC automatic control, which can realize the clamping, exhaust, temperature control, curing time, alarm, mold unloading function. Touch screen can display the plate temperature of each heating zone and timing.
ZG270-500 ပစ္စည်းကိုဖန်ဆင်း 4. Hydraulic ဆလင်ဒါသည် plunger ကြိတ်ပြီးအောင်, ချ. ပြီးနောက်, ခက်အလွိုင်းသံသိပ်သည်း texture ကိုနှင်ထုတ်ချမှတ်; ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါပိတျထားသော YX type ကိုတံဆိပ်ခတ်လက်စွပ်ချမှတ်။
5. Hydraulic System ကို: အဟိုက်ဒရောလစ်ဘူတာရုံလူသိများတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုအသုံးပြုပြီးအော်တိုမှိုပွင့်လင်းခြင်းနှင့်နီးစပ်, အိပ်ဇောနှင့်မှိုချနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။
နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters များကို:
အောက်တွင်အသုံးအများဆုံးအသုံးမော်ဒယ်များဖြစ်ကြောင်း, ငါတို့သည်လည်းဖောက်သည်အထူးလိုအပ်ချက်နှုန်းအဖြစ်စက်တွေ customize ။
ပုံစံ *2XLB-DQ400 * 400 *2XLB-DQ600 * 600 *2XLB-DQ750 * 850 XLB-DQ1000 * 1000 *2XLB-DQ1500 * 1500 *2*2XLB-DQ300 * 300
စုစုပေါင်းဖိအား (MN) 0.50 1.00 1,60 4.00 8.00 0.25
ပန်းကန်ရှင်းလင်းရေး (မီလီမီတာ) 125 125 125 125 125 125
အလုပ်လုပ်အလွှာ222(4)2(4)2(4) 2
piston လေဖြတ် (မီလီမီတာ) 250 250 250 (500) 250 (500) 250 (500) 250
ပန်းကန်ဖိအား (MPA) 3.1 2.8 2.5 4.0 3.6 2.1
မော်တော်ပါဝါ (KW) 2.233 5.5 5.5 2.2
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) 1300 3500 6500 11000 22000 1050
ပုံစံ XLB-D780 * 600 XLB-D800 * 1000 XLB-D900 * 1100 XLB-D1000 * 1200 XLB-D1350 * 1500
စုစုပေါင်းဖိအား (T) ကို 160 250 300 500 1000
ပန်းကန်အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) 780 * 600 * 1000 800 * 1100 900 * 1200 1000 * 1500 1350
ပန်းကန်ရှင်းလင်းရေး (မီလီမီတာ) 200 140 150 150 150
အလွှာအရေအတွက်ကို2444 6
မော်တော်ပါဝါ (KW) 5.5 7.5 7.5 11 22
ယခင်: intensive ရော်ဘာပလတ်စတစ် Banbury Kneader
အလျားလိုက်ခွေး Toy အရိုးပလတ်စတစ် Injectin Moldin ...
ခြောက်သွေ့ Mac ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းအသီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်သန့်ရှင်းရေး ...
ရော်ဘာဘေးလ် Cutter စက်
လျှော်စက် Desalting ချဉ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်